Faham la'aanta ka jirta qaab dhismeedka wasaaradaha dowladda SOOMAALIYA
Tuesday May 17, 2022 - 10:24:11 in Wararka by Mogadishu Times
Ugu horrayn , bismallahi raxmani raxiim, alla mahad leh, rasuulkiisaana sharaf leh.
Qoraalkani waa mid dhaxal reeb u ah, ruux kasta oo uilaaheey u sahlo inuu hoggaanka dalka qabto. Waa qoraal ku saabsan muhiimadaha koowaad ee laga doonaayo in ay ka miro dhaliso xukuumadda cususb eesoo socota. Dunidan waxaa horumar baahsan gaara dalka kulansada labo arrimood, dad aqoon badan leh, iyo dhaqaale baahsan. Soomaalidu waa suurto gal, laakiin tiro badan oo kaafin karta baahiyeheenna muhiimka ah lama heli karo, sidaa awgeed waxaa lagu qasaban yahay aqool tayeysan iyo tabihii looga faaiideysan lahaa inta aan heli karno.
Qaab dhismeedka wasaaradaha dowladda
Qaab dhismneedka wasaaradaha ee hadda jira waa mid duugoobay oo laga kaaftoomay (redundant) ee aan la jaan qaadi karin baahiyaha waqtiga la joogo, iyo mustaqbalka. Waxaa is dhex daadsan wasaaradaha soo socda. Wasaradaha laga kaaftoomay ee macno la’aan u jira, halkaaso dhaqaale badan lagu qasaariyo, oo wax faa’iido ah laga helin. Tusaale, wasaarada hawlaha guud iyo guryenta iyo dib u dhiska. Hawlaha guud waa maxay, waa biyaha, korntada, jidadka, buundooyinka, dhismaha dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo IWM. Waa wasaarada loogu talo galay xilligii shuuciyadda ama hanti wadaagga la dhisay. Xilligaas private sector ma jirin. maanta waxaan leenahay private sector ama hayado gaar loo leeyahay oo hawlahaas qaban kara.Manta dalku waa federal, maamul goboleedyadu iyagaa ku filan iney hawlahaas qabsadaan. Kaliya qandaraas tartan daah furan loo qabto, cidii ku guuleystana laa siiyo. Wasaaradan waxaa laga dhigi karaa Directorate ama agaasin leh 50 qof oo khubaro sare ah ka tala bixiya siyaadaha iyo guud ee hufnaan ee lagu maareynaayo hawlaha aan kor kusoo sheegay. Uma baahna wasaarad ay u shaqeeyaan 500 shaqaale oo mushaar macno la’aan qaata.
Wasaraada xoolaha. Sidoo kale xoolaha dadka iska leh ayaa dhaqda, Berigii hore xoolaha waa dhoofin jirtay dowladda, hadda waxaa dhoofsada dadka iska leh xoolaha. Marka wasaaraddu maxay qabaneysaa???kaliya waxaa loo baahan yahay khubaro ku xeel dheer caafimaadka xoolaha oo cilmi baaris ku badqabka iyo tayeynta xoolaha Soomaaliya. Sidoo kale wasaarada weynaatay oo ay u shaweeyaan shaqaale tiro badan uma baahna.
Wasaaradda kaluunka waa sidoo kale
Wasaarada beeraha waa sidoo kale.
Gunaanad. Seddexda wasaaradood waxaa laga dhigi karaa hal wasaarad oo loogu magic daray wasaaradda dhaqaalaha. Ogoow xoolaha, kalluunka, iyo beeruhu waa lafdhabarata dhaqaalaha soomaalia. Marka waxey noqon karaa seddex agaasin oo kal ah agaasinka beeraha, agaasinka xoolaha, agaasinka kalluunka.
Waarada biyaha iyo tamartu maxat qabataa? Koronto iyo biyo comapniyaahs private ayaa bixiya, sidoo kale looma baahna shaqale badan oo mushaar la siiyo. Waxay u baahan tahay khubaro kooban oo hoggaamisa istraatiijiyda fog ee siyaasada lagu maaeyrnaayo tamarta iyo biyaha soomaaliya. Waxaa laga dhigi karaa agaasin ama wakaalad leh khubaro kooban.
Wasaaradda warfaafinta waa wasaarad loogu talo gay iney dicaayadaha dowadda faafsio oo loogu talo galay in shacabka lagu jaho wareeriyo war beenaadka lagu amaanyo hoggaanka dalka. Dalku wuxuu leeyahay idaacado gaar loo leeyahay. Kaliya waxaa loo baahan yahay wakaalad kormeerta idaacadaha gaarka loo leeyahay hufnaanta wararkooda iyo macluumaadka ay shabaka u gudbinayaan. Looma baahna wasaarad leh dhaqanka oryateeshimaddii kacaanka oo ummadda ku jaho wareerisa heeso lagu amaanayo hoggaAnka dalka haya.
Dastuur qabyo ah
Datuurku waa heshiis bulsho iyo tiirka ugu muhiimsan dowladnimada. Haddii datuurkeennu qabyo yahay, waligeen waxaan ahaaneynaa bulsho aan heshiis ahayn, waxaana dhaceysa inaan sharciga loo hogaansamin oo madaxweyne walba sidii doono sharciga ka yeelo sidii inuu sharciga ka sarreeyo oo dowladnimadu noqoto hayd koox gaar ahi ku sghqeysto. Tusaale waxaa noogu filan shanti sano ee lasoo dhaafay. Sidaan awgeed waa in la si degdeg ah loo qabyo tiraa
Maxkamadda dastuurigaah iyo garsoor madax banaan. Wali lama hayo. Haddaan sharciga lagu kala baxayn, sow ma muuqato in shargica qof walba siduu doono u fasiran mayo, oo ganmaha la isula tagi mayo. Waa tii dhacday markuu madaxeyne Farmaajo labo sano oo jeebkiisa ku darsaday. Maxaa kadhashay?
Gobolka Banaadir– xagge lagu arkay Seddex million oo aan matalaad ay soo doorteen aan lahay? Madaxweynihii villa Soomaaliya qabta ayaa siduu doono ka yeela. Canshuurtoodana waxba loogu qaban. Jidadkii laga xiray oo isu sodka shacabka deggen iyo hantidooduba ku baa’ba’aan.Waa maxay caddaalad darrada ka weyn ee bini’aadam samayn karo? Maxaa waxaa la sugayaa in shacabka banaadir deggen hubkood qaatan dabdedna aan la mahadin?
Maxaa loo la’ yahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah si looga gudbo xildhibaanno iyo snetaro kooban doortaan madaxweyna. Sow ma in carabta cigaallayeda, yam yam iyo qadaad weyn adeegsadaan usoo dhiibaan wiilal calool buuran oo sidii abeeso lugaaleydii u socda kuna iibsadaan qaranimada Soomaaliya. Ma nin la leeyahay oo camiil u ah dowado shisheeye ayaa lagu aamini karaa aayaha geeddi socdoka umadda Soomaaliya.
Xaggee lagu arkay qaran aan lahayn siyaadad hagta cilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowladaha aan danaha wadaagno. Sow noqon meyso in madaxweynihii yimaada danahiisa shaqsiyaydeed u burburin mayo danaha qaranka ee sooyaalka ah. Side dal aan dagaal taariikhi ah naga dhaxeeyey, intaan shah iyo kafee isla cabno madaxdooda u oran karnaa saaxiibo ayaan nahay dhulkeenna iyo baddeena siinno. Sow ma muuqato madax caqli carruureed leh galin meyso halis weyn qarinimada Soomaaliya.
Xaggee lagu arkay wiil ama hooyaddi wali irmaan tahay oo general ah?
Xaggee lagu arkay dadweyne ama xildhibaano badan oo safaf ugu jira airpt dhexdiisa iney soo dhoweeyan madaxda dalka. Soomaaliya kaliya ayey ka jirta. Sow dhaqan xumo gaamurtay oo in wax laga qabto u baahan.Sow maaha mid ka mid dhaqan xumada dhalisa kali talisnimada.
Waxaan filyaa intaa iyo in ka badan oo qaldan in si degdeg ah wax looga qabto si dolwanimada Soomaaliya karaamo iyo sharaf yeelto.
AFEEF:Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan kali ah ,